शीर्षकमा बाइबल पदहरू: ट्रिनिटी -> भगवान
१ कोरिन्थी 8:6
हाम्रा लागि चाहिँ एउटै पिता परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ। उहाँले नै सबैको सृष्‍टि गर्नुभयो। उहाँकै लागि हामी जिउँछौं। हाम्रा एउटै प्रभु; येशू ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ। उहाँद्वारा नै सबै सृष्‍टि भयो र उहाँद्वारै हामी जिउँछौं।
२ कोरिन्थी 3:17
किनभने प्रभु आत्‍मा हुनुहुन्‍छ। प्रभुका आत्‍मा भएको ठाउँमा स्‍वतन्‍त्रता हुन्‍छ।
२ कोरिन्थी 13:14
प्रेरित हुनलाई म पावल मानिसबाट होइन तर येशू ख्रीष्‍ट र उहाँलाई मरेकाबाट बिउँताउने परमेश्‍वर पिताबाट नै बोलाइएको हुँ।
किनभने ख्रीष्‍टको शरीरमा नै परमेश्‍वरको सारा स्‍वर्गीय स्‍वरूप बसेको छ।
हाम्रा निम्‍ति एउटा बालक जन्‍मेका छन्! हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ! उनले हामीमाथि राज्‍य गर्नेछन्। उनको नाम “उदेकका सल्‍लाहकार,” “पराक्रमी परमेश्‍वर,” “सनातनका पिता,” “शान्‍तिका राजकुमार” हुनेछ।
परमप्रभु, जसले इस्राएलमा राज्‍य गरेर त्‍यसको रक्षा गर्नुहुन्‍छ, सर्वशक्तिमान् परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “म पहिलो र पछिल्‍लो एक मात्र परमेश्‍वर हुँ, मबाहेक अर्को कुनै परमेश्‍वर छैन।
वचन मानिस हुनुभयो र हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। उहाँ अनुग्रह र सत्‍यले भरिपूर्ण हुनुहुन्‍थ्‍यो। हामीले उहाँको ठूलो महिमा देख्‍यौं। उहाँले पाउनुभएको महिमाचाहिँ पिताको एकमात्र पुत्रलाई सुहाउने महिमा थियो।
पिता र म एकै हौं।”
“हेर, कन्‍येकेटीको गर्भ रहनेछ र तिनले छोरो पाउनेछिन्। अनि मानिसहरूले उहाँलाई इम्‍मानुएल भन्‍नेछन्।” इम्‍मानुएल भनेको चाहिँ परमेश्‍वर हामीसित हुनुहुन्‍छ।
 बप्‍तिस्‍मा लिइसक्‍नुभएपछि येशू झट्टै पानीबाट निस्‍कनुभयो, त्‍यति बेला स्‍वर्ग उघ्रियो र उहाँले परमेश्‍वरको आत्‍मालाई ढुकुरजस्‍तै आफूमाथि आइरहनुभएको देख्‍नुभयो। त्‍यति नै खेर स्‍वर्गबाट यस्‍तो बोलिएको सुनियो, “यिनी मेरा प्‍यारा छोरा हुन्, यिनीदेखि म धेरै खुसी छु।”
 किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य भनेको खाने र पिउने कुरा होइन, तर यो पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्‍ति र आनन्‍दको कुरो हो, जुन पवित्र आत्‍माले दिनुहुन्‍छ। यस किसिमले ख्रीष्‍टको सेवा गर्नेले परमेश्‍वरलाई खुसी तुल्‍याउँछ साथै मानिसबाट स्‍याबासी पनि पाउँछ।
 सबै मानिसले बप्‍तिस्‍मा लिंदैगर्दा येशूले पनि बप्‍तिस्‍मा लिनुभयो र उहाँले प्रार्थना गरिरहँदा स्‍वर्ग उघ्रियो र पवित्र आत्‍मा ढुकुरको रूपमा उहाँमाथि ओर्ली आउनुभयो अनि स्‍वर्गबाट यस्‍तो आवाज आयो, “तिमी मेरा प्‍यारा पुत्र हौ, तिमीसँग म धेरै खुसी छु।”
 सुरुमा जब परमेश्‍वरले आकाश र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो, पृथ्‍वी आकारबिनाको, उजाड र सुनसान थियो। पानीले सबै ठाउँ ढाकेको थियो र गहिरो अन्‍धकार थियो। अनि पानीमाथि परमेश्‍वरका आत्‍मा घुमिरहनुहुन्‍थ्‍यो।
 त्‍यस बिरामीले भन्‍यो, “हजुर, पानीमा लहरी चल्‍ने बेलामा मलाई पोखरीमा लगेर हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन। म जान खोज्‍दाखोज्‍दै अर्कोले उछिनिहाल्‍छ।” तब येशूले भन्‍नुभयो, “उठ र आफ्‍नो ओछ्यान बोकेर हिँड।”
१ पत्रुस १:१-२
 म प्रेरित पत्रुसबाट पोन्‍टस, गलातिया, कापाडोकिया, एशिया र बिथिनियामा विदेशिएर तितरबितर भई बसेका परमेश्‍वरले छान्‍नुभएका परमेश्‍वरका जनहरूलाई यो पत्र लेख्‍दै छु। अघिबाटै आफ्‍नो योजनाअनुसार परमेश्‍वर पिताले तिमीहरूलाई आफ्‍नै पवित्र जन हुनलाई छान्‍नुभएको हो। येशू ख्रीष्‍टको रगतले पवित्र भएर उहाँकै आज्ञा तिमीहरूले मान्‍न सक भनी उहाँले तिमीहरूलाई आत्‍माद्वारा आफ्‍नो बनाउनुभयो। तिमीहरूमाथि अनुग्रह र शान्‍ति प्रसस्त होस्।
२ कोरिन्थी १:२१-२२
 परमेश्‍वरले नै हामी र तिमीहरूलाई ख्रीष्‍टमा दरिलो बनाउनुभएको छ। उही परमेश्‍वरले हामीलाई अलग गर्नुभएको छ र मेरै हो भन्‍ने छाप लगाउनुभएको छ अनि उहाँले दिनुहुने सबै थोकको बैना हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्‍मा दिनुभएको छ।
१ कोरिन्थी १२:४-६
 पवित्र आत्‍माका वरदानहरू धेरै किसिमका छन् तर वरदान दिने पवित्र आत्‍मा एउटै हुनुहुन्‍छ। धेरै किसिमले सेवा चाहिँन्‍छ तर मालिकचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ। धेरै किसिमका ईश्‍वरीय योग्‍यताहरू छन् तर हरेकलाई यी सब दिने परमेश्‍वरचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ।
 परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको आशा एउटै भएजस्‍तै शरीर पनि एउटा हो अनि पवित्र आत्‍मा पनि एउटै हुनुहुन्‍छ। एउटै प्रभु, एउटै विश्‍वास र एउटै बप्‍तिस्‍मा छ। सबैका पिता परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्‍छ। उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्‍छ। सबै काम गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्‍छ र उहाँ सबैमा हुनुहुन्‍छ।
 नदेखिने परमेश्‍वरकै देखिने रूप ख्रीष्‍ट हुनुहुन्‍छ। उहाँ सृष्‍टिभन्दा जेठो हुनुहुन्‍छ किनभने स्‍वर्ग र पृथ्‍वीमा भएका सबै कुरा उहाँद्वारा सृष्‍टि भयो। दृश्‍य र अदृश्‍य लगायत आत्‍माका शक्तिहरू, मालिकहरू, शासकहरू र अधिकारीहरू, यी सब ख्रीष्‍टद्वारा र ख्रीष्‍टकै निम्‍ति सृष्‍टि भयो। सबै कुराहरूभन्दा पहिले उहाँ नै हुनुहुन्‍थ्‍यो अनि सबै कुराहरू उहाँमा नै अडेर रहेका छन्।
 येशूले जवाफ दिनुभयो, “फिलिप! यतिका दिनसम्‍म म तिमीहरूसँगै छु र पनि तिमीले मलाई चिन्‍दैनौ? मलाई देख्‍नेले पितालाई देखिसकेको छ। मलाई देखेर पनि तिमीले मलाई किन पिता देखाइदिनुहोस् भन्‍छौ? के तिमी ‘म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्‍छ’ भन्‍ने कुरालाई विश्‍वास गर्दैनौ? तिमीहरूलाई भनेका कुरा मैले आफ्‍नै तर्फबाट भनेको होइनँ। ममा हुनुहुने पिताले नै आफ्‍नो काम मबाट गर्दै हुनुहुन्‍छ। म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्‍छ भन्‍ने कुरालाई विश्‍वास गर। नभए मैले गरेका काम हेरेर ममा विश्‍वास गर।
 तिमीहरूको व्‍यवहार येशू ख्रीष्‍टको जस्‍तै होस्। उहाँ सधैँ परमेश्‍वरकै समान हुनुहुन्‍थ्‍यो। तर उहाँले बलजफती परमेश्‍वरसमान हुने विचारै पनि गर्नुभएन। उहाँले आफ्‍नै इच्‍छाले यी सबै त्‍याग्‍नुभयो अनि कमारोको रूप लिनुभयो। उहाँ हामीहरूजस्‍तै मानिस भएर जन्‍मनुभयो। उहाँले नम्र भएर मृत्‍युसम्‍म, क्रूसकै मृत्‍युसम्‍म आज्ञा मान्‍नुभयो।
 पिता र म एकै हौं।” यो सुनेर यहूदी अगुवाहरूले फेरि येशूलाई हान्‍न ढुङ्गा टिपे। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “पिताले अह्राउनुभएको धेरै असल काम मैले तिमीहरूको अगाडि गरेको छु। ती काममध्‍ये कुनचाहिँ कामको लागि तिमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्‍न खोजेका हौ?” यहूदी अगुवाहरूले भने, “हामीले तँलाई तेरो राम्रो कामको लागि ढुङ्गाले हान्‍न खोजेका होइनौं, तर तैँले परमेश्‍वरको निन्‍दा गरिस्। त्‍यसैको लागि नै हान्‍न खोजेका हौं। तँ मानिस भएर पनि आफैंलाई परमेश्‍वर बनाउन खोज्‍छस्।” येशूले जवाफ दिनुभयो, “के तिमीहरूको आफ्‍नै धर्मशास्‍त्रमा ‘परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, तिमीहरू ईश्‍वरै हौ’ भनी लेखिएको छैन र?” परमेश्‍वरले यहाँनेर जोसँग बोल्‍नुभएको थियो, तिनीहरूलाई उहाँले ईश्‍वर भन्‍नुभयो, र धर्मशास्‍त्र त झूटो हुन सक्‍दैन। तर मलाईचाहिँ पिताले आफ्‍नो उद्देश्‍य पूरा गर्न यस संसारमा पठाउनुभएको हो। त्‍यसो भए म परमेश्‍वरको पुत्र हुँ भन्दा कसरी तिमीहरूले मलाई परमेश्‍वरको निन्‍दा गरिस् भन्‍छौ?